Dhacdo Taariikhi Ah: Hormuudka Baalashleyaasha! | Salaan Media
Home Community Dhacdo Taariikhi Ah: Hormuudka Baalashleyaasha!
Dhacdo Taariikhi Ah: Hormuudka Baalashleyaasha!
Badri waa baalashle (Kaba-caseeye) fir-fircoon oo dhalinyar ah, kana hawl-gala kaamboolka weyn ee Jaamacadda Camuud, kaasi oo dhaca jihada Bari ee magaalada Borama. Waxa uu ka soo jeedaa qoys danyar ah, dakhliga ka soo gala shaqadiisana waxa uu ku taageeraa qoyskiisa.
Shaqadiisa waxa uu u gutaa, sida muuqata, si xilkasnimo iyo kalsooni leh. Shaqadiisu waa inuu kabaha u baalasheeyo/caseeyo ardayda dhigata Jaamacadda Camuud. Sida la ogyahay, waxa dhigta Jaamacadda Camuud, ku dhawaad afar kun oo arday, hase ahaatee, waxa ay wax ku dhigtaan, xilliyo kala duwan, dhawr xarumood oo kala duwan. Badri isagu waxa uu ka hawl-galaa xarunta weyn ee dooxada Camuud.
Wiilkan dhalinyarada ahi waxa uu soo jiitay dareenka in badan oo dadweynaha magaalada Borama ku nool ah. Uma soo jiidan shaqada uu hayo kaliya, waxase uu ka qayb qaatay dhismaha jid laami ah oo isku xidha Camuud iyo Borama. Waxa uu ka qayb galay xaflad qaadhaan loogu ururinayay dhismaha dariiqaasi aan sheegnay. Dadkii xaflada joogay ayaa si gacan furan jeebabkooda u furay. Macalimiintii iyo shaqaalihii Jaamacaddu mid waliba bil mushaharkeed ayuu ku deeqay. Ardayda iyo waalidiintuna calaa karaan ayay wax u bixiyeen.
Badri waxa saameeyey qudbadihii qiirada lahaa ee madashaasi laga jeediyey, in kasta oo aanu dhaqaale buuran haysan, hadana wuu is hayn kari waayey oo waxa uu goostay in dadaalkaasi bulsho uu wax ku darsado. Wuu kacay oo cod-baahiyaha qabsaday, isaga oo dadka is barayana waxa uu ku tiraabay: ““Aniga oo ah Hormuudka Baalashleyaasha/Kabo-caseeyayaasha, waxa aan halkan kaga dhawaaqayaa qaadhaan aan kaga qayb qaadaanayo dhismaha wadadan!”. Lacagta uu bixiyey waxa ay u dhigmaysay intii uu maalintaasi shaqeeyey, si uu gacan uga geysto dhismaha jidkaasi. Ka dib markii la arkay deeqda ka timi, wiilkan yar ee dan-yarta ah, dad badan ayaa dhiiraday oo wixii ay hayeen u huray hawshaasi horumarinta ah.
Dadaalka iyo dhiiranaanta wiilkani yari waxa ay ina tusaysaa sida ay dadweynaha uga go’an tahay inay ka qayb qaataan kobcinta waxbarashada iyo mashaaricda horumarinta ah. Waxa kale oo ay daaha ka faydaysaa hanaanka loo dhan yahay ee loo adeegsaday hirgalinta mashaaricda danta guud ah, kuwaasi oo sida muuqata xataa baalashlayaashu ay qayb ka yihiin!
Darajada uu adeegsaday (Hormuudka Baalashleyaasha) ayaa ah mid aan ka xiiso yarayn dhaqaalaha yar ee uu ku yaboohay. Bacdamaa uu ka hawl-galo deegaan tacliimeed, waxa raad kaga tegay erey-bixinta Jaamacaddaha u gaarka ah, sidaasi darteed ayuuna naftiisa ugu yeedhay Hormuudka Baalashleyaasha!
Ganacsigiisa ayaa kobcaya, sida la soo weriyeyna waxa uu hada iibsaday bas, kaasi oo ka dhex shaqeeya magaalada. Arintase xiisaha lihi waxay tahay, inaanu joojin shaqadii uu maalkan ka kasbaday ee baalashka ama kabo-casaynta, ha yeeshee uu si kalsooni iyo xirfadleh u sii wato!
063 4456 553